Apple Music inotangisa iyo nyowani Shazam Discovery playlist, runyorwa rwevanonyanya kuteerera vhiki rega rega IPhone nhau
Chimwe chezvinhu zvakakosha zveApple kutenga mumakore apfuura kwave kutengwa kwaShazam, inozivikanwa mimhanzi yekutsvaga application. Kutenga kwakatanga nekubatanidzwa kwaShazam muSiri, tinogona kubvunza Siri kuti rwiyo rwupi rwaitamba munzvimbo yedu uye nekutenda kuShazam tekinoroji akaifungidzira, asi pakupedzisira Apple yakaisa nyama yese pane grill ndokufunga kutenga iyo Shazam kambani kuti izvi zvive chikamu chemazana eCupertino.
Kutenga kunonakidza nekuda kwekurumbira kukuru kwaive naShazam, uye ndizvo ndiyo purogiramu yakakwana yekuvandudza Apple Music, iri iro rinopa Apple Music neruzivo nezve izvo vanhu vari kuteerera mune yepanyama nharaunda. Ndeapi matanho anotevera ekubatanidzwa? Apple ichangotanga chirongwa che nyowani playlist yakabatana naShazam kuitira kuti vhiki nevhiki isu tigoona akanyanya kumakwa nziyo kuburikidza neakakurumbira mumhanzi kuwanikwa app. Mushure mekusvetuka tinokupa rumwe ruzivo nezve iyi nyowani yekubatana pakati peShazam neApple Music.
La nyowani playlist "Shazam Zvakawanikwa: Top 50" inotarisa kune maartist eiyo nguva, asi kwete mavari chete kubvira "Inofanotaura" avo vachanongedzeras mumwedzi iri kuuya, saka hatisi kuzowana yekutamba inonyatsoteerera mimhanzi. Chinhu chakanaka, uye icho ndechekuti Shazam tekinoroji inobvumira chaizvo izvo, kuziva zvese zvinonzwikwa nevashandisi munzvimbo dzawo, uye kufanotaura zvavanonzwa.
Iwe unoda here kuva unoyevedza? Shazam Zvakawanikwa: Pamusoro makumi mashanu yakavakirwa pakutsvaga kweShazam kunoitwa pasirese. Nziyo idzi, dzichangoburwa kubva kuvaenzi vachiri kubuda, dzinovandudzwa vhiki nevhiki Kana iwe uchida imwe, usakanganwa kuiwedzera kuraibhurari yako.
Unogona kuwana iyi nyowani nyowani "Shazam Discoveries: Pamusoro makumi mashanu" nekupinda muApple Music uye kusarudza iyo Ongorora tebhu. Apple yakaratidza iyi nyowani nyowani kumusoro kweKutsvaga pamwe nekuiwedzera kune Izvo Chinyowani chikamu. Mhanya uone!
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Apple Music inotangisa iyo nyowani Shazam Discovery playlist, runyorwa rwevanonyanya kuteerera vhiki rega rega
Netflix inowedzera iyo 'Yazvino' chikamu kuti tirege kupotsa chero chinhu